Xubnaha baarlamaanka ayaa kulankoodi ugu horeeyey waxey ku yeesheen magaalada Baydhabo si ugu horeyntii loo xaliyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey laba garab oo ay u kala baxday dowladii iyo baarlamaankii lagu soo dhisay Kenya bishii Oktoobar 2004.
Xubanaha baarlamaanka ayaa ku kala tegey ismaandhaaf ka dhashay axdiga ay IGAD u soo diyaarisay dalka Soomaaliya oo intiisa badan laga soo minguuriyey dhinaca Itoobiya. Qodobada ugu waaweyn oo khilaafku ka dhashay ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka laga aruuriyo hubka, hub kalana aan la soo gelin iyadoon xal loo helin kii faraha badnaa ee dalka horay u yaaley. Sidoo kale waxaa la ansixiyey inaan ciidan ka socda dalka Itoobiya oo dano cadowtinimo ka leh dalka Soomaalida aan lagu soo dari Karin ciidamada imaanaya Soomaaliya si ay dadka hubka uga dhigaan.
Col. C\_llahi Yusuf oo aan marna ka tanaasulin riyadiisa ku saleysan qabiilka oo ah in dalka ciidan shisheeye uu u qabto ayaa heshiiskii Cadan kadib wuxuu ka codsaday Ururka Afrika iyo QM in Soomaliya laga qaado cunaqabateynta ka saran dhinaca hubka si maleeshiyadiisa ay isku heybta yihiin oo ay Yemen soo hubeysay ay fursad ugu noqoto iney dalka xoog ku qabsadaan iyagoo kaashanaya ciidamo Itoobiyana oo lagu soo gelinayo magaca nabad ilaaliyeyaal.
Col. C\_llahi oo u arkayey in markaan xubnaha baarlamaanka ay u nugul yihiin codsigiisa ayaa markii uu furmay kulanka baarlamaanka ka socda Baydhabo ayaa ku xiray nabadeyn si rasmiya uga dhexdhalata xubnaha baarlamaanka iney imaneyso marka la fuliyo heshiisyadii sida gaarka ah ay kooxdiisu ula soo gashay shirkado iyo dowlado shisheeye, iyo in la ogolaado keenista ciidamo shisheeye oo ka socda Itoobiya iyo qaadista cunoqabateynta hubka saaran Soomaaliya.
Rabitaanka Col. C\_llahi Yusuf ayaa inta badan xubnaha baarlamaanka ugu muuqda meel ku dheg sababtay in si dhaqso ah ay u kala baxaan labdii garab ee siyaasada ku kala tegey. Dad badan ayaa waxaa u muuqday in Col. C\_llahi uusan sameyn wax isbedel siyaasadeeda oo isku soo celin kara xubnaha baarlamaanka, iyo in ku dhegenaanshaha qodobada dhaliyey khilaafka ay sii kala fogeyneyso siyaasiyiinta labada garab.
Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka soo horjeestey In Col. C\_llahi uu qudbadiisa ku soo daro qodobadii lagu kala tegey intii aysan dhicin in la heshiisiiyo garabyadii iskhilaafsanaa. Sidoo kale hogaamiye kooxeedyada Muqdisho oo gacan saar fiican la sameystay Mareykanka ayaa u diray QM codsi ay kaga soo horjeedaan qaadista cunoqabateynta hubka saran Soomaaliya. Intaas waxaa dheer in fekir mideysan laga helay QM, Dowlada Mareykanka, wadamada bixiya deeqda oo ay intuba ka soo horjeedaan qaadista cunoqabateynta, taas oo wakhtigaan la joogo aan ugu muuqan caqligal.
Waxaa la qiyaasay in Col. C\_llahi ay ugu muuqatay inay tahay fursad in inta ay isku mushquulsan yihiin dagaaloogayaasha Muqdisho iyo wadaadada diinta Islaamka inuu dhaqso uga saxiixdo baarlamaanka ogolaanshaha qodobadaas. Taas oo u jideyn lahayd inuu hub iyo ciidamo shisheeye kala soo dego meesha uu doono, kuna jeediyo cida uu doonayo iney la dagaalamaan.
Siyaasada Col. C\_llahi ayaa laga yaabaa dhowaan iney ku dhacdo isbedel, taas oo laga yaabo inuu isbaheysi ka raadiyo beelaha degan Gobolada Dhexe oo ay dadka ugu badan degaankaas ay dhaqan wadaag la ahayeen beeshiisa. Col. C\_llahi ayaa taageeradii uu ka heystey Itoobiya waxaa hoos u dhigay Prof. Geeddi, Jurille, iyo Maxamed Dheere, kuwaas oo baahidii isaga loo qabey meesha ka saaray. Sidoo kale Hogaamiyeyaasha Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeyso dowlada Mareykanka, dowladahaas oo hadda taageersan iney dhaqalahooda siiyaan kooxdaas intii ay ku khasaari lahayeen maalgelinta dowlada Col. C\_llahi Yusuf oo aan u muuqan mid soo kici karta wakhti dhow.
C\_llahi mar hore ayuu ka go’ay dowladaha Carabta, kadib markii uu edeyn badan u soo jeediyey diinta Islaamka iyo madaxda dowladaha Carabta, isagoo isku muujinayey si uu kaalmo dhaqaale uga helo Mareykanka iyo reer galbeedka, isaga ayaana maanta isgeliyey go'doonkan siyaasadeed oo uga kala yimid shirqoolada ay u dhigeen kooxdiisa iyo kooxda ka soo horjeeda.